Olee Otú Ị Pụrụ Dezie Tag Ozi maka Music na Mp3tag maka Mac
> Resource> Mac> Mp3tag maka Mac: Olee Otú Ị Pụrụ Dezie Tag Ozi maka Music on Mac
Mp3tag, ihe dị mfe na-eji ngwá ọrụ dezie mkpado ozi maka songs on windows, adịghị nwere Mac ọzọ kama. Windows ọrụ ndị dị nnọọ ịkwaga Mac nwere ike atụ uche nke a smart gadget ma na-achọ iji chọta ihe kpọmkwem egwuregwu na Mac eme ka ndụ mfe. Adịghị Ọsụsọ ya ugbu a. Ebe a bụ ezi nhọrọ. Wondershare TidyMyMusic maka Mac nwere ike nguzo maka Mp3tag on Mac n'echiche nke na ọ pụrụ ime mkpado edezi ihe ọma. Ọ na-akpaghị aka na-achọpụta rụọ ID3 ọmụma banyere onye ọ bụla song na okụt album artwork, lyrics n'otu oge. Ke adianade do, ị nwere ike hazie gị songs na nke a usoro si edezi ọrụ. Ike na-eche ka a na-agbalị? Akpa ibudata a omume na wee soro zuru ezu nkuzi n'okpuru.
1 Tinye gị music collection ka Mp3tag maka Mac
iTunes n'ọbá akwụkwọ ga-akpaghị aka kwukwara na idozi iTunes mgbe usoro ihe omume ga-emepe nke ahụ n'oge mbụ.
N'ihi na mpaghara gị music, i kwesịrị iji aka ịdọrọ na dobe ha ka ha na idozi Music taabụ. Ma ọ bụ pịa Open File iji nweta nile music na mmemme.
2 Ịchọpụta mkpado ọmụma nke ọ bụla song nhọrọ
Họrọ a song na pịa Chọpụta button ka e gosiri n'okpuru. Mgbe niile ọmụma banyere ya ga-achọ si internet ma ọ bụ na nchekwa data, gụnyere omenkà, artwork, lyrics na ndị ọzọ.
Rịba ama: Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ songs mata, ị nwere ike họrọ ha niile na pịa Chọpụta Họrọ button na otu ebe dị ka Chọpụta. Ọzọ ụzọ dị mfe ga-abụ pịa iṅomi bọtịnụ ma niile music ga-mata na duplicates nwekwara ike-ewepụ.
Mgbe niile ọmụma bụ n'ebe ahụ, pịa Mee button ka jikota ha ka ha na songs otu otu. I nwekwara ike họrọ ọtụtụ songs itinye ọmụma na oge.
3 Dezie song ọmụma dị ka ị na-amasị
Ọ bụrụ na n'ihi mma management, nwere ike ị chọrọ tinye mmezi okwu na ọmụma. Echegbula. Ị nwere ike nweta ya. Pịa Dezie na akara ngosi na wee dee ihe ọ bụla ọmụma ị chọrọ ke ihe ọ bụla dị ka omenkà, genre na ndị ọzọ. Ị nwekwara ike ịgbanwe sere ihe oyiyi ọ bụla ị na-amasị.
All a mere na ugbu a ị nwere ike nyefee music na ọmụma zuru ezu na-egwu na ihe ọ bụla obere ngwaọrụ ị chọrọ. Ị na-ekwe na-egwu music na Mac Mp3tag site abụọ-ịpị. Chọta a usoro a mma? Ị gaghị agbaghara a ohere. Download otu na-enye ya a laa. Ọ g'eme gị.
Aspyr Media oku nke ọrụ 4 Patch maka Mac
Mac OS X 10.7 odum NEW Akụkụ: Multi-Touch Mmegharị